Autodraw: waxa ay tahay, waxa loogu talagalay iyo cidda ka qaybqaadata | Hal -abuureyaasha Online
Ma taqaanaa barnaamijka Sawir qaade? Waa aalad la mid ah Rinjiga oo laga yaabo inaad ka ogaatay, Microsoft, laakiin ku darid dheeri ah: sirdoon macmal ah. Barnaamijkani waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee naqshadeeyayaasha. Laakiin waa inaad taqaanaa sida wanaagsan ee loo isticmaalo.
Sababtaas awgeed, waxaan rabnaa inaan kaala hadalno AutoDraw xagga hoose. Waxaad ogaan doontaa waxa uu yahay, waxa aad ku samayn karto barnaamijka, faa'iidooyinka iyo khasaaraha uu leeyahay iyo qaar ka mid ah tafaasiil dheeraad ah oo ay tahay inaadan sinaba u seegin. Ma u soconnaa?
1 Waa maxay Autodraw
3 Waa maxay shaqooyinka uu leeyahay Autodraw
4 Waa kuwee fannaaniinta dhabta ah ee sawirrada Autodraw
Waa maxay Autodraw
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad ka ogaato AutoDraw waa inay xiriir dhow la leedahay Google, si aad u badan arjiga webka oo ay soo saartay shirkadan oo ujeeddadeedu tahay inay caawiso dadka aan aqoon sida loo sawiro si hal -abuurkaagu loogu sameeyo sidii inay yihiin xirfadlayaal.
Tusaale ahaan, ka soo qaad in lagu weydiiyo inaad faras sawirto. Haddii aadan aqoon sida loo sawiro, waxaad ku dadaali doontaa inaad ka dhigto silhouette caadiga ah ee faraska, laakiin ma weydiisan karno wax intaas ka badan. Taa bedelkeeda, AutoDraw wuxuu adeegsadaa saldhiggaas si uu u aqoonsado sawirka una waafajiyo sawirka aad runtii rabto inaad qabato, sida sawirka aad u faahfaahsan oo si fiican loo sameeyey xayawaankan.
Si kale haddii loo dhigo, AutoDraw waa aalad lagu rinjiyeeyo oo loo beddelo sawirradaas loo sameeyay kuwa kale oo tayo iyo natiijo wanaagsan leh, si qof kastaa dadka uga dhigo inay u maleeyaan inay yaqaanaan sida wax loo sawiro. Si tan loo sameeyo, waxay u isticmaashaa sawirrada vector -ka saldhig ahaan, kuwaas oo ah ikhtiyaarrada ay ku siin doonto si aad u soo dejisan karto ka dibna u isticmaasho si aad u beddesho midabka, dib -u -qaabayn ama si fudud ugu habayso mashruuca aad waddo.
Waa qof walba heli karo oo gebi ahaanba bilaash ah. Markaa, waxaad ka qori kartaa waxaad ka heli kartaa sawir xirfadeed gebi ahaanba bilaash. Hadda, ma codsan kartid sawirro aad u faahfaahsan, maxaa yeelay ma jiraan. Waxay inta badan ku salaysan yihiin sawirro gaar ah, oo ah hal dabeecad. Tani macnaheedu maahan inaad dhowr meelood meel dhigi karto, maadaama ay kuu oggolaaneyso inaad xulato sawirka oo aad cabbirto ama aad u dhaqaaqdo si aad u abuurto halabuur gaar ah.
Miyaad hore u xiisaynaysay inaad isticmaasho oo aad aragto waxa AutoDraw awood u leeyahay inuu sameeyo? Hagaag, kaa yeeli mayno inaad sugto, maxaa yeelay hoosta waxaan ku siinaynaa qiyaas yar oo ah waxaad ku samayn karto.
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay waa inaad tagto guriga Bogga rasmiga ah ee AutoDraw. Uma baahnid inaad kombiyuutarkaaga wax kala soo degto, waxaad u baahan tahay biraawsar si aad u gasho shabakadda.
Markaad halkaas tagto waxaad ka heli doontaa suurtagalnimada inaad ku bilowdo aaladda (xiddigta) ama booqo menu -ka halkaas oo ay ku baraan cidda qorayaashu yihiin, sida loo sameeyo waxyaabo gaar ah ama ku saabsan AutoDraw.
Maaddaama aan danaynayno aaladda lafteeda, markaad gujiso si aad u xidhato shaashadda waxay u beddeli doontaa nooc ka mid ah barnaamij sawir leh shiraac madhan iyo menu aad u fudud bidixda.
Sida caadiga ah buraashka ayaa la dhigi doonaa, markaa waxaad bilaabi kartaa rinjiyeynta mar kasta oo aad rabto. Markaad sidaas samaynayso, qaybta sare aaladdu waxay ku siin doontaa ikhtiyaarro markay isku dayayso inay aqoonsato waxaad rinjiyeynayso oo ku siinayso qiyaasta sawirrada laga yaabo inay yihiin waxaad sawirto. Waxaad kaliya ku qasbanaan doontaa inaad mid gujiso oo qoraalladaada waxaa lagu beddeli doonaa sawirka si fiican loo qabtay.
Ugu dambayntii, waxaad mar kale sawiri kartaa, si aad u abuurto halabuur, ama aad ku bilowdo ka shaqaynta sawirkaas, tusaale ahaan midabaynta (iyo sidoo kale asalka), abuurista tirooyin kale (oo ku salaysan waxaad sawirto ama kuwa kale, iwm).
Waa maxay shaqooyinka uu leeyahay Autodraw
AutoDraw ayaa caan ku ah inuu yahay aalad sawir. Laakiin runtu waxay tahay inaysan ahayn waxa kaliya ee qalabkan onlaynka ahi kuu samayn karo. Waxaa jira waxyaabo badan oo kuu oggolaanaya inaad abuurto sawirradaada dhowr daqiiqo gudahood. Tusaale ahaan, waxaad:
Ku dar qoraalka. Waxaad ku dari kartaa intaad rabto, inkasta oo ay tahay inaad tixgeliso meel bannaan. Intaa waxaa dheer, waxaa lagu ridi karaa noocyo kala duwan oo xarfo iyo midabyo ah.
Ku dar midab. Sida caadiga ah sawirradu waxay ku soo bixi doonaan buluug, laakiin runtu waxay tahay inaad sidoo kale ku yeelan karto midabbo kale. Haddii aad hore u lahayd sawirka, waa inaad beddeshaa midabka ka dibna garaac badhanka buuxinta si aad u doorato sawirka oo aad u beddesho.
Fogee Si aad u weydiso shiraacda. Haddii aad rabto inaad ku yarayso warqadda lafteeda, geeska midigta hoose waxaad ku leedahay saddex -xagal hadh leh oo kaa caawinaya inaad soo yarayso ama ka badan.
Ka gaabso. Haddii ay dhacdo inaad u baahato inaad dib u noqoto oo aad tirtirto shaqadii aad hore u soo qabatay.
Soo dejiso oo wadaag. Si aad u soo dejiso sawirka, qaab png, ama ugu wadaag shabakadaha bulshada. Dabcan, maskaxda ku hay in sawirka png uu noqon doono mid aad u culus maxaa yeelay wuxuu ku soo dejisan doonaa tayo sare. Haddii aad rabto inaad cadaadiso ama culeyska iska yareyso, waa inaad ku furtaa barnaamijka tafatirka sawirka oo aad ku keydisaa qaab kale ama aad gelisaa internetka si aad u beddesho cabbirka.
Ku dar qaabab. Waxaad ku dari kartaa qaababka joometeriga naqshaddaada.
Marka laga reebo shaqooyinkan, waxaad sidoo kale leedahay dad kale oo aad ka dhex galeyso furayaasha furaha, laga soo bilaabo menu -ka ugu weyn.
Waa kuwee fannaaniinta dhabta ah ee sawirrada Autodraw
Hadda oo aad ogtahay aaladda AutoDraw, miyaadan la yaabin yaa qorayaasha kuu suurta gelinaya inaad adeegsato sawirro runtii si fiican loo qabtay oo aan ahayn kuwii asalka ahaa ee aad samaysay si barnaamijku kuu siiyo fursado aad ku ogaato waxa ma sawirtaa? Waa hagaag haa, waxaa jira dad ka dambeeya sawirrada. Fanaaniintani sidoo kale waxay xaq u leeyihiin in la ogaado.
Xaaladdan oo kale, AutoDraw waa iskaashi fanaaniin ah. Dhammaan sawirrada soo baxa waxaa lagu soo dejisan karaa shatiga caalamiga ah ee Creative Commons Attribution 4.0.
Inta badan sawirada aad ku aragto AutoDraw waxaa iska leh kooxda Selman Design, istuudiyaha naqshadeynta ee New York, laakiin waxaa jira qaar ay sameeyaan farshaxanno iyo naqshadeeyayaal kala duwan sida Simone Noronha, Tori Hinn, Pei Liew, Erin Butner, Julia Melograna , Melia Tandiono ama Hawraf.
Dabcan, waxoogaa yar oo sawirro cusub ah ayaa lagu darayaa, kuwaasina waxay u muuqdaan in laga soo dejinayo websaydhka fanaaniinta, labadaba si ay isu ogeysiiyaan abuurayaasha, iyo inay awoodaan inay adeegsadaan sawirrada.
Miyaad ku dhiirran tahay inaad tijaabiso AutoDraw oo aad keydiso waqti markaad sawirto qaar ka mid ah naqshadaha?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Sawir qaade